Somali - BBC News Somali_4pxapp
Bogga hadda, War
BBC News, Somali - War
Top story - Somali
Kenya oo jawaab adag ka soo saartay go’aanka la filayo ee dacwadda badda
Kenya ayaa sheegtay inaysan aqoonsan doonin go'aanka lagu wado inuu ka soo baxa maxkamadda caaalamiga ah ee ICJ ee k u saabsan muranka soohdinta badda ee kala dhexeeya Soomaaliya.
9 Daqiiqadood ka hor
Afar qodob oo qareenada Soomaaliya ee ICJ ay diiradda saareen
Cod, Maxaa xigi doono go'aanka ICJ
Maxaa ku dhacay markabka Mareykanka ee isagoo nuclear wada marayay Shiinaha agtiisa?
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in aan wali la ogeyn waxa ku dhacay markabkooda oo ah nooca biyaha hoostooda quusa. 15 naaquude ayaa ku dhaawacmay dhacdadan.
Boqol jir loo haysta dilka kumannaan qof
Josef S oo lagu eedeeyey inuu gacan ka geystay dilka 3,518 maxbuus oo lagu diley Sachsenhausen oo ah meel u dhaw magaalada Berlin
Daanyeerkii hadda ka hor sida mucjisada ah u matalay bani'aadanka oo geeriyooday
Danyeer hadda ka hor dunida si weyn uga caan baxay kaddib markii uu isagoo bani'aadan isu ekeysiinaya sawir soo galay ayaa lasoo tabiyay in uu geeriyooday.
Diblomaasi ka yaabay wasakhda taalla caasimadda loo soo bedalay
Laurent Delahousse oo ka hadlayay kulan uu soo qabanqaabiyay Golaha Caasimadda Monrovia, ayaa wuxuu sheegay inuu la yaabay ustagga yaalla wadooyinka caasimad sanad ka hor markii halkaa loo bedalay.
Fiqi: Arrimaha aan isku qabannay Qoor Qoor ee igu khasbay inaan is casilo
Axmed Macallin Fiqi oo ahaa wasiirka amniga Galmudug ayaa bartiisa Farcebook ku shaaciyay inuu iska casilay xilkii uu hayay maamulkaasi.
7 Oktoobar 2021
Boqor amray in loo jebiyo telefoonka xaaskiisa si sirteeda uu u helo
Dacwaddan ayaa dhaawac ku ah Amiirkan maalqabeenka ah ee jecel in aan la ogaan arrimihiisa u gaarka ah isla markaasna neceb buuqa iyo is jiid jiidka.
La wareegistii uu sacuudiga riixayay ee kooxda Newcastle oo dhabawdey
Sucuudiga oo kula wareegay adduun gaaraya 300m oo pound kooxda katirsan Horyaalka Ingiriiska ee Newcastle United oo soo idlaadey
Caro ka dhalatay yuhuud loo oggolaaday inay ku tukadaan masjidka Al Aqsa
Garsoore Israa'iil ah ayaa xukumay in Yuhuudda ay si "aamus" ah ugu gudan karaan salaadooda dhismaha masjidka Al-Aqsa,
Malaariyada talaalka loo helay dhibaato intee la eg ayay ku haysaa Soomaaliya?
Bal qiyaas duni bilaa Facebook ah?
Somaliland oo faahfaahin ka bixisay sababta ay dadka reer Koonfurta uga saarayso Sanaag
10 arrimood oo ay ragga sameeyaan, dumarkana ka xanaaqaan!
Dhageyso, Qaabeynta aabeyaasha Mustaqbalka - Tababarka nolosha iyo aabaha wanaagsan, Muddada 4,23
Gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka waxaa lagu qabtay tababar maalin socday oo ay ka qayb galeen ilaa 100 wilal dhalinyaro ah oo da'a ahaan u dhaxayso 17 ilaa 24 jiro ah.
4 Oktoobar 2021
Dhageyso, Garaadso inta aadan guursan - Xalka bilowga ah ee dhibaatada qoyska, Muddada 4,58
Waa buug laga qoray arrimaha guurka iyo waxa qofka la gudboon inuu sameeyo guurka ka hor.
1 Oktoobar 2021
Dhageyso, "Maxaad u baahisay dhaliisha madaxweynaha Somaliland ayaan xabsi ku muteystay", Muddada 6,23
Maxkamad ku taalla magaalada Burco 2 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed ku xukuntay Amiira shire oo ah gabar macluumaad soo galisa barta Youtube.
30 Sebtembar 2021
Muuqaal, Dad uu waraabe weeraray oo bixinaya tallooyin looga badbaadi karo, Muddada 3,36
Wiil yar oo 9 jir ah oo uu waraabe qaaday, kadibna laga dhigay ayaa la geeyay xarun tallooyin iyo daryeel lagu siiyo dadka dhibaatooyinka kala kulmay dhurwaaga.
Dhageyso, Fanaanadda Itoobiyaanka ah ee Soomaaliga ku heesta, Muddada 9,02
Fanaanada Hirut Teklehaimanot oo ah fanaanad u dhalatey dalka itoobiya ayaa luuqadaha ay ku heesta waxaa ka mid ah Soomaaliga.
23 Sebtembar 2021
Shirkan ayaa ku soo begmaya xili khilaaf uu u dhaxeeyo madaxda ugu sareysa dalka.
Wararka doorashada Soomaaliya 2021
Lix arrimood oo la xiriira heshiiska Golaha Wadatashiga Qaran ee Soomaaliya
Waxay madaxda isla soo qaadeen in habraaca doorashada xildhibaanada Aqalka Sare ee Somaliland xal laga gaaro.
23 Agoosto 2021
Sidey dowlad goboleedyadu u qeybsadaan 54-ta xubnood ee Aqalka sare?
Soomaaliya waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday doorashada Aqalka Sare ee Baarlamaanka federaalka, kaasoo ka kooban 54 xubnood.
Golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya waa mid ka mid ah labada aqal ee sharci dajinta ee dalka, oo markii aqalkan loo geeyo kan Golaha Shacabka waxa ay sidaas ku noqonayaan Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya.
Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo saaary qaab dhismeed ku aadan sida loo sugayo amniga doorashada lagu wado inay ka dhacdo Soomaaliya.
Muxuu yahay xalka laga gaaray arrinta gobolka Gedo?
Guddiga dib u heshiisiinta gobolka Gedo ayaa ra'iisal wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, u gudbiyay warbixinta howlihii u qabsoomay iyo talo soo jeedintooda la xiriirta xal u helista arrinta gobolka.
22 Luulyo 2021
Goolkii ugu horreeyay ee Messi ee PSG iyo niyadjabkii Man City
Lionel Messi ayaa kooxda Paris St-Germain si qurux badan ugu dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay xilli ay kooxda Manchester City ku garaaceen koobka Champions League.
Nin loo heysto "khiyaanadii ugu xumeyd" ee soo martay taariikhda cayaaraha adduunka
Ninkan oo lagu eedeeyay in cayaartoy aan naafo ahayn uu u soo sharxay cayaaraha Paralympics-ka ee ka dhacay Sydney ayaa markii ugu horreysay ka hadlay arrintaas.
24 Sebtembar 2021
Soomaali orod-yahan ah oo si khalad ah ugu guuleystay tartan
Cumar Axmed oo ku guuleystay Tartanka orodka kalabarka ah ee Bristol ayaa isu diiwaan geliyay masaafaha 10k balse waxa uu galay qayb khalad ah.
Saddex ciyaartooy oo ka tirsan xulka qaranka ee Jabuuti ayaa magangelyo ka codsaday dalka Faransiiska halkaas oo muddo toddobaad ah ay ku sugnaayeen garoonka diyaaradaha ee Paris.
Cristiano Ronaldo oo ku biiray Manchester United
Warbaahinta caalamka waxaa si deg deg ah u qabsaday sheekada u saabsan Ronaldo oo ku laabtay United.
27 Agoosto 2021
Baxwal Jirde: Waxaan filanayay kabo dahab ah, ee ma filaneyn kuwo qalin ah
Waxaa gelinkii dambe ee shalay la soo gabagabeeyay tartanka kubadda cagta ee gobollada Puntland.
25 Agoosto 2021
Aqoon GuudArag dhammaan
Maxaa keenay in ay gaagaabtaan dadkii dunida ugu dhaadheeraa?
Mudo tobanaan sano ah ayaa dalka Netherlands ku faani jiray in ay yihiin dadka ugu dhaadheer dunida.
2 Oktoobar 2021
Dabayaaqadii sagaashameeyadii, Saddaam Xuseen ayaa u tegey sawir qaade isaga oo wata codsi la yaab leh.
Muxuu yahay looxa qadiimiga ah ee Mareykanka uu u celinayo Ciraaq?
Maraykanka ayaa Maanta, oo khamiis ah, Ciraaq ku soo celiyey loox qadiimi ah oo dhoobo ah oo ka tarjumaya qayb ka mid ah qoraallad diimeedkii ugu faca weyn adduunka.
Maxay tahay 'da' yaraan' sideyse u saameyneysaa jiilka Z ee dhanka shaqada?
Takoorka dhanka shaqada ayaa inta badan saameysa dadka waaweyn, balse xitaa da'yarta ayaa wajaha cunsuriyad aynaan inta badan ka hadlin.
16 Sebtembar 2021
Lixda meelood ee aan qorraxdu ka dhicin in ka badan 70 maalmood
Goobahaan ayaa dad badan oo dalxiisayaal ah ay ku tagaan booqosho si ay u arkaan qorraxda aan dhicin.
Ma ogtahay in dhismaha xaramka uu yahay kan ugu qaalisan dunida?
Daraasad ay sameysay xarunta MSN money ee ka faalooda dhaqaalaha adduunka gaar ahaan dhismayaasha ganacsi ayaa lagu soo bandhigay dhismayaasha kuwooda ugu qaalisan adduunka.
Maxaad ka ogtahay hantida qarsoon ee madaxda caalamka ee hadda daaha laga rogay?
Hantida iyo heshiisyada qarsoon ee hoggaamiyeyaasha caalamka, siyaasiyiinta iyo maalqabeenada ayaa lasoo saaray, kadib dokumentiyadii ugu ballaarnaa ee qaabilsan maaliyadda ee abid lasoo dusiyo.
3 Oktoobar 2021
Sidey ugu suurtagashay Ruja Ignatova inay sameyso lacag dhan $4bilyan oo doolar iyadoo caalamka oo dhan ka iibineysa barnaamij been abuur ah oo ay ku sheegeysay in lacagta ay ku labajibbaareyso - xaggeyse aadday?
Tobnaan milyan oo doollar ayay ku iibsadeen guryaha, haddana kuma faraxsana
Mid ka mid ah dhismayaasha ugu qaalisan magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa waxaa la soo deristay dhibaato kaddib markii dacwado badan laga gudbiyay.
25 Sebtembar 2021
Maxaa sawirka gabadhan yar loogu iibinayaa kumanaan kun oo doolar?
Chloe Clem, oo hadda 10 jir ah, ayaa sannadkii 2013-kii aad ugu baahday internet-ka iyadoo laba jir ah, ka dib markii hooyadeed ka duubtay muuqaal ay si layaab leh ay kaga falcelineyso safarkii layaabka lahaa ee Disneyland.
Shanta shaqo ee qarka u saaran in laga waayo dunida
Hadda iska jir shaqooyinka qaar ee qarka u saaran in la waayo sanadaha soo socda.
Filimka Soomaaliya ku saabsan ee $26m oo doollar laga helay laba bilood gudahooda
Filimka oo ay ka muuqdaan labo jilaa oo caan ka ah oo u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed, Kim Yun-seok iyo Zo In-sung, wuxuu ku saabsan yahay "sheeko dhab ah oo qabsatay diblumaasiyiin u dhashay dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ee ku sugnaa Muqdisho markii uu dagaalkii sokeeye bilowday, 1991".
10 Sebtembar 2021
Halista caafimaad ee Kimikooyiin ku jira maacuunta aan wax ku karsano iyo dharka
Weligaa ma isweydiisay sababta aysan cuntadu ugu dhegin digsiga, sababta dufanku uusan uga soo bixin mikrowave-ka, ama sababta aysan biyuhu ugu qooyn jaakadaada?
Cuntooyinka aad u baahantahay in aad badsato marka aad gaarto 40 jir
Cuntada waxay door weyn ka ciyaartaa nolosha aadanaha, waxaana loo baahan yahay in qofka uu qaato cuntooyin nafaqo leh.
Waa sheeko ay dad badan u arkaan inay tahay mid dhiiro galineysa dadka ka shaqeeya xaruumaha dadweynaha loogu adeego gaarahaan xaruumaha caafimaadka.
Ninkii sameeyay "daawadii riyada uu ku arkay ee coronavirus" oo xanuunka u geeriyooday
Eliyantha White ayaa hore u sheegay in daawadiisa ka hortagga Covid lagu shubi karo webiyada si loo cirribtiro xanuunka safmarka ah.
Xanuunkan ayaa markii ugu horeysay saameeyay shaqaalaha safaaradaha Maraykanka iyo Kanada ee Havana, Cuba, sannadihii 2016 iyo 2017.
22 Sebtembar 2021
Ma cudurro ayaa ka dhashay shidaalka laga qodayo gobolka Qorraxeey?
Mustafe Cagjar oo haatan booqasho ku maraya qaar ka mid ah degmooyinka gobolkaasi ayaa sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay in baaritaan lagu sameeyo cabashada shacabka ee deegaannada shidaal qodistu ay ka socoto.
Seyniska iyo Tiknolojiyadda
Ninka TikTok ugu caansan ee aan hal eray dhihin
Lame wuxuu yiri, "Waxaan billaabay inaan muuqaallo sameeyo sababtoo ah waxaan rabay inaan ka qosliyo dadka."
Muxuu yahay gantaalka Mareykanka uu tijaabiyay ee guuxiisa ka dheereeya ?
Ruushka iyo Shiinaha ayaa labaduba waxay sheegeen inay sameysteen oo ay tijaabiyeen hub la mid ah kan haatan uu Mareykanka tijaabiyay.
Wax ka ogow diyaaradda ay ciidanka Maraykanka ku dhaartaan
Ciidanka Cirka ee Mareykanka, ee loo yaqaanno (USAF), waxaa uu ka mid yahay qaybaha ugu waaweyn ee ciidamada qalabka sida ee Mareykanka, mas'uuliyadda koowaad ee ciidankan ayaa ah dagaalka hawada, difaaca hawada Maraykanka , iyo horumarinta cilmi baarista milatariga dalka Maraykanka oo dhaqaale faro badan uu ku baxo.
In kasta oo uusan lahayn cinwaan TikTok, Jack ayaa hadana daawada muuqaallada lagu baahiyo barta.
Apple oo dadka isticmaala iPhone uga digtay in gariirka mishiinadu dhaawaci karo
Dadka isticmaala teleefanada gacanta ee iPhone ayaa looga digay gariirka xoogan ee ay sameeyaan mootooyinka ama dhugdhugleyda waaweyn oo dhaawici kara habka ay u shaqayso kamarada telefoonkaas, sida ay sheegtay shirkadda Apple.
14 Sebtembar 2021
Muxuu yahay ceelka "cadaabta" ee ku yaalla bariga Yemen?
Dad badan oo ka agdhow xitaa ma jecla inay ka hadlaan arrimaha ceelka, iskaba daa inay soo booqdaane.
Maxaad u "argagaxdaa" marka mobile-ka lagaa qaado?
Dhaqaatiirta cilmu-nafsiga waxay ka digayaan dhallinyarada qabatima telefoonka ee aanba iska deyn karin.
Ma ogtahay in telefoonka uu burburin karo noloshaada?
Telefoonka gacanta waa aalad yar oo saameyn weyn ku leh nolosheenna, kuwa sida wanaagsan u isticmaalana waxay ka heli karaan faa'iidooyin aad u badan.
Listen Next, Xiga Dunida Iyo Maanta, 16:59, 8 Oktoobar 2021, Muddada 1,00,00
Barnaamij aan ku eegno wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida.
Toos u dhageyso, TOOS Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 8 Oktoobar 2021, Muddada 30,30
Waa Idaacad aad kaga bogan karto wararka duhurnimo iyo welibo cayaaraha.
Dhageyso, Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 8 Oktoobar 2021, Muddada 29,00
Barnaamijka aroornimo ee soo bandhiga wararka gogoldhaca u ah maalinta iyo cayaaraha.
Dhageyso, Dunida Iyo Maanta, 16:59, 7 Oktoobar 2021, Muddada 1,00,00
Wax ka ogow meelaha adduunka ee aysan haweenku tagi karin
Safarku waa khibrad cajiib ah, wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad barato meelo aadan baran lahayn haddaadan safri lahayn, gaar ahaan intii lagu guda jiro fasaxyada.
Waa kuwama madaxda majaraha u haya Ahlu Sunnada soo rogaal celisay
Xiisad ayaa weli ka taagan gobollada dhexe ee Soomaaliya kadib markii dhawaan ay dib usoo rogaal celiyeen Ahlu Sunna Waljamaac oo dib u qabsaday magaalada Guriceel.
Afar arrimood oo ku saabsan xiisadda ka taagan Galmudug
Xiisad ayaa weli ka taagan gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya kadib markii shaley ciidamo ururka Ahlu Suna Waljamaaca ay qabsadeen magaalada Guriceel.
Muxuu yahay hubka uu Mareykanka mamnuucay ee Turkiga uu ku adkeystay inuu helo?
Mareykanka ayaa digniin culus u diray Turkiga balse madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in uu dalkiisa keenayo hubkaas loo diiddan yahay. Haddaba waa hub noocee ah?
Farqiga u dhaxeeya qoriga AK-47 ee Ruushku sameeyay iyo M16 oo Mareykan ah
AK-47 iyo M16 waa laba ka mid ah qoryaha ugu badan ee la adeegsado, haddii ay ahaan lahayd fallaago, militari ama booliis.
Maxay ku qotontaa booqashada Rooble ee Qadar?
Wafddi u hoggaaminayo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa gaaray dalka Qadar kadib markii uu casuumaad ka helay amiirka dalkaas Sheekh Tamim bin Xamad Al Thani, sida ay sheegtay dowladda.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa sheegay xilli uu magaalada Sochi kulan kula lahaa Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, in sidoo kale ay ajandayaasha ku jiraan tallaabooyinka la qaadi karo ee quseeya diyaaradaha dagaalka iyo maraakiibta badda hoosteeda.
Sidee kaluumeysato Soomaali ah oo badda ku lumay bilooyin ku gaareen Sri Lanka?
Kaluumeysto Soomaaliyeed oo muddo 5 bilood ah la la'aa ayaa waxaa ay gaareen dalka Sri Lanka.
Falalka Islaam nacaybka ah ee ay Muslimiinta Mareykanka wajahaan
Daraasad laga sameeyay Mareykanka ayaa lagu ogaaday in saddex meelood labo ka mid ah dadka ku nool dalkaas lagula dhaqmay Islaam nacayb, halka in ka badan boqolkiiba 90 ay sheegen in arrintaasi ay saameysay caafimaadka maskaxdooda.
Wax ka ogow baxsashada, dib u soo qabashadooda iyo waxa ku dhici doona maxaabiistan?
Afar ka mid ah lixda maxbuus ee Falastiiniyiinta ah ee dib loo soo xiray kaddib markii ay ka baxsadeen xabsiga sida wayn loo ilaaliyo ee Gilboa horraantii bishan ayaa la filayaa inay qaab muuqaal ah maxkamadda uga qabgalaan Arbacada.
Barnaamijka BBC Somali TV
Daawo telefishinka BBC Somali
La soco wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida.